Azo atao ve ny mamorona rindran-damina tsara ho an'ny tranonkala vao haingana?
Sarotra ny mahazo ny rohy mankany amin'ny tranokala e-commerce. Na izany aza dia azonao atao ny misoroka ny fampiasana fitaovana fanadiovana maimaim-poana toy ny TSY ho an'ny fahombiazan'ny orinasa. Izany no tranga ho an'ny ankamaroan'ny orinasa an-tserasera - kansas city web development companies. Mety ho sarotra ho an'ny loharanom-baovao izay tsy manana bilaogy izany.
Tokony ho vonona ianao fa ny fifandraisana eo amin'ny fananganana trano dia haka fotoana sy ezaka maro, na dia afaka maheno momba io dingana io avy amin'ireo sampan-tsarimihetsika fikarohana karazana aza ianao. Mampanantena izy ireo fa hamorona lahatsary avo lenta avo lenta mandritra ny iray volana amin'ny vidiny mety. Na izany aza, tokony ho azonao fa ny zava-drehetra dia toa tsara loatra ka ho marina. Raha ny tena izy, dia mila enim-bolana farafahakeliny na mihoatra noho izany ny miankina amin'ny orinasa sy ny tsenan'ny varotra.
Eo amin'ny fahazoana ny vaovao farany an'i Google, mila mijery tsara ny kalitaon'ny backlinks ianao. Mila manorina amin'ny sehatry ny indostrianao izy ireo, loharanon'ny tranonkala ahafahana miditra amin'ny Internet. Ankoatra izany, mila manamarina ianao raha nisy orinasa iray nogadraina na tsia. Ny famoronana backlinks, mety hanamafy orina ny toerana misy anao ao amin'ny valin'ny fikarohana ianao na hampihena azy ireo mampiseho an'i Google fa tsy loharanom-pejy azo antoka ianao.
Ity lahatsoratra ity dia natao mba hizara aminareo ny sasany amin'ireo tetik'ady fanorenana tsara indrindra izay mahomby amin'ny asan'ny tranonkala e-commerce.
Fomba hanamboarana rindran-damba tsara
ireo fomba maro samihafa. Na izany aza, aorian'ny tsy fahombiazan'izy ireo, mbola mijanona ny rohy. Ny mpiara-miasa ara-barotra teo aloha dia mbola mifandray amin'izy ireo satria tsy manana fomba ahafantarana ireo orinasa ireo fa tsy misy ary tsy misy intsony. Ny pejy web-n'izy ireo dia mbola miasa, fa tsy manana lanjany na fifamoivoizana. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia tsy afaka mahita azy ny mpizara rohy tapaka.
Ny fampiharana "fomba fitondran'ny lehilahy," dia tsy afaka mampiasa pejy misy anao ho an'ny tombontsoanao. Afaka mankasitraka ny loharanom-baovao toy ny anao ianao, ny tranokalan'ny maty izay mampifandray azy ireo. Azonao atao ny manontany ireo olona ireo hiverina hiverina any amin'ny tranokalanao. Amin'ny fampidirana ity teknolojia fanorenana tsotra ity noharian'i Brian Dean (mpamorona bolongana SEKB an'ny Backlinko SEO), azonao atao ny manangana backlinks ho an'ny tranokalanao amin'ny fomba maimaimpoana sy organika.
Ny fanamarihana an-tsoratry ny fananganana
Ity rafitra fananganana rohy ity dia miasa tsotra ary afaka ampiharina amin'ny orinasa an-tserasera rehetra izay te-hamorona lamosina avo lenta. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny mamantatra hoe iza ireo loharanon-tranonkala efa manonona ny marika sy ny vokatra azonao mivarotra, ary angataho amim-panajana izy ireo hampidirinao ny rohy loharano mankany amin'ny hevitrao. Na izany aza, alohan'ny hangatahana rindran-kira, mila manamarina raha mety ho loharanom-pifandraisana lehibe ho anao ny loharanon-tranonkala iray na tsy mendrika ny sainao. Zavatra iray hafa ilainao hanamarinana dia ny tsy hino an'ity resaka ity.